Qaababka Gadhka Gaaban ee Ragga | Niman qurux badan
Hababka gadhka gaaban ee ragga
Alicia tomero | | La xiiray, Daryeelka shaqsiyeed, Isbeddellada
Sannadkan 2022 gadhka gaaban wuxuu sii wadaa inuu dejiyo isbeddelka. Hadhay calaamada raganimada waxaana jira rag ay ka go'an tahay inay isku dayaan oo ay ilaaliyaan qaabkan. Ma adka inaad hesho gadh gaaban, laakiin waa inaad ogaataa sida loo ilaaliyo dhererkiisa iyo inuu weli taagan yahay.
Goynta ayaa ah mid aad u kala duwan oo had iyo jeer way wanaagsan tahay in la ogaado dhammaan moodooyinka si aan u dooran karno kan ugu habboon qaabka wejiga. Ninkaas jecel inuu xidho gadhka, waxaad dooran kartaa dhammaan qaababka aan hoos ku muujinno.
1 Gar fudud oo dabiici ah
2 Gadh gaaban oo goglan
3 Van Dyke gooyay
4 Habka Balbo
5 Gar gadhka leh
6 Gadh aad u gaaban oo Chevron shaarbo leh
7 Gadh aad u gaaban oo shaarubo caadi ah leh
8 Gadhka riyaha
9 Sidee loo daryeelaa gadhka gaaban?
Gar fudud oo dabiici ah
Qaabkeeda iyo korriimadeedu waa dabiici, dhawr maalmood sug ilaa gadhku ka soo baxo inta u dhaxaysa 2 iyo 3 sentimitir. Waa habka ugu fiican ee lagu hubin karo qaabka gadhkaaga oo loo eego haddii uu kuu muuqdo. Isla korriin isku mid ah ayaa go'aamin doona haddii meelaha ay ku nool yihiin si sax ah loo daboolay ama haddii ay u baahan tahay taabasho. Gadhka noocaan ah ayaa ah kan ugu fudud oo sidaas darteed ku habboon dhammaan qaababka timaha, xataa ragga aan timaha lahayn.
Gadh gaaban oo goglan
Gadhka noocaan ah waxaa loogu talagalay ragga jecel inay xirtaan gaaban oo nadiif ah. Dhererkiisu ma aha mid aad u dheer (inta u dhaxaysa 0,5 iyo 0.9 cm) waxaana lagu qeexaa iyada oo dhammaan darafyadiisa ay yihiin kuwo aad u hagaagsan oo isku heer ah. Muuqaalkeedu waa nadiif ah oo contoured waxayna u baahan doontaa taabashada gooyahaaga, usbuuc kasta.
Van Dyke gooyay
Goyntani waa hubaal inay ku xasuusinayso gadhka caadiga ah ee Pierce Brosnan ama Johnny Depp. Gadhkiisa waa la dhimaa shaarubo qadiimi ah iyo ari caadi ah, doorasho aad u fiican oo loogu talagalay ragga leh gadhka aan caadiga ahayn ama raba inay muujiyaan wajigooda. Muuqaalkaaga ayaa caawin doona iyaga daamanka qaawan oo muuqaalkaaga ka dhig mid aad u badan.
Waa habka aad u abuuri karto wejigaaga si qurux badan gadhka la jarjaray oo laba qaybood loo qaybiyay. Gadhka ayaa la calaamadeeyay oo koray ilaa dhererkiisa saxda ah, laakiin qaybta shaarubaha, inkasta oo ay sidoo kale dheer tahay, kuma biiri doonto inta kale. Habkani waa qayb ka mid ah qaabka "garka barroosinka", halkaas oo aan kula kulmi karno wejiyada caanka ah sida Robert Downey Jr.
Gar gadhka leh
Goynteeda iyo qeexitaankeedu waa ragga doonaya inay noqdaan kuwo qurux badan oo geesinimo leh. Gadhkiisu wuu leeyahay dhuuban iyo qaabka suunka kaas oo gadhka oo dhan u socda, dhinac ilaa dhinac, laga bilaabo mid kasta oo biinanka ah. Waa in ay dhex martaa dhammaan daanka iyo garka, haddii aad rabto iyo haddii kaleba waxa lagu xidhi karaa qaybta shaarubaha, inkastoo ay inta badan yihiin meelo. gebi ahaanba kala duwan oo madaxbannaan.
Gadh aad u gaaban oo Chevron shaarbo leh
Shaarubahan la hubo in aan la dareemin sannadihii la soo dhaafay. Waa shaarubaha astaanta u ah ee lagu garto Freddie Mercury, heesaagii boqoradda, oo leh dhumuc weyn oo ballaaran oo ku yaal meel ka sarreysa afka iyo sanka hoostiisa.
Iyada oo dhammaan isbeddellada shaarbaha iyo gadhka, qaabkoodu wali waa midka calaamadeeyay moodada 80-meeyadii oo hadda waxay siinaysaa midab yar. Waxay leedahay muuqaal dhumuc leh oo adag oo la socda ama aan lahayn gadh aad u gaaban, shaki la'aan classic.
Gadh aad u gaaban oo shaarubo caadi ah leh
Habka kale ee gadhka gaaban ayaa la helaa oo ay weheliyaan shaarbo gaar ah, waxaad xitaa ku sharadi kartaa kuwa ugu gaar ah oo leh talooyin wareegsan, ama midka loo oggol yahay inuu u koro si uu u cufan yahay.
Shaarubaha sidoo kale waxaa loo kori karaa sida "stache" classic. Waa nooc ka mid ah dhammaan meelaha loo oggol yahay inay si dabiici ah u koraan, laakiin aan lahayn korriin xad-dhaaf ah. Haddii loo baahdo, taabasho yar ayaa la samayn doonaa oo gadhka ayaa loo oggolaan doonaa inuu koraan, laakiin dhererkiisu aad u gaaban yahay, si shaaribku u soo baxo.
Garka haray garka ayaa ku filan si ay u laadlaan oo ay qaataan magaca garka ariga. Waa la labisan karaa si qumman oo gar gaaban leh, halkaas oo aad u qaadan doonto si go'an. Kaliya waa inaad go'aamisaa inta ballac ahaan aad rabto garka aad rabto inaad ka baxdo.
Sidee loo daryeelaa gadhka gaaban?
Haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad gadhka bixi doonto, waxaa laga yaabaa inaadan filanayn natiijada aad rabtay ama waxa Dareenku wuxuu u muuqdaa mid aan raaxo lahayn. Garashada marka ugu horeysa waxay noqon kartaa kiis aan macquul ahayn, markaa waa inaad sugtaa waqti dheer si aad u hesho gadh buuxa.
Si ay u korto cuncun la'aan ayaa jirta saliid gaar ah Kaas oo kaa caawin doona in uu noqdo mid siman oo caafimaad qaba. Gadhka oo la gaabiyo waa hawl u baahan dulqaad iyo ilaalin. gooye wanaagsan waxay kuu fududayn doontaa hawshaada. Waa inaad maalgelisaa qaboojiyaha ama saliidda si aad u ilaaliso fuuq-baxa maqaarka oo aad yeelato timaha jilicsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Hababka gadhka gaaban ee ragga
Waa maxay keratin iyo waxa loogu talagalay?
Sida loogu sheego qof aad jeceshahay